Kuraastii Garbahaarray oo loo wareejiyay Ceel-waaq | KEYDMEDIA ENGLISH
Kuraastii Garbahaarray oo loo wareejiyay Ceel-waaq
Guddiga Doorashooyinka ayaa ku dhowaaqay in doorashadii 16-ka kursi ee magaalada Garbahaarey loo wareejiyey magaalada Ceel-waaq.
MUQDISHO, Soomaaliya - Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka Heer Federaal [FEIT] ayaa degaan doorashada 2-aad ee Jubbaland, ka raray Garbahaarrey una baddelay Ceel-waaq, sida ku cad waraaq dhawaan ka soo baxday [GHDHF].
Guddigu wuxuu sheegay in ay lama huraan tahay in 16 kursi la doorto, ka hor int aan loo dareerin doorashooyinka Gudoonka Golayaasha iyo Madaxweynaha, wuxuuna sheegay in caqabad amni ka jirto magaalada Garbahaarrey.
Guddigu, wuxuu maamulka Garbahaareey, ku eedeeyay in ay hor istaageen xubno ka socday Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka oo magaalada ku tagi lahaa booqasho loogu kuur galayay xaaladaha amni, si doorashadu uga dhacdo.
“Guddigu waxaa uu go'aamiyey in doorashada garbahaareey laga bedelo laguna bedelo in doorashada lagu qabto Magaalada Ceelwaaq ee gobolka Gedo”. Ayaa lagu yiri warka ka soo baxay Guddiga Doorashooyinaka FEIT.
Madaxweynaha muddadu ka dhamaatay Farmaajo, iyo Madaxweynaha Jubbaland, Axmed Madoobe, ayaa muddo dheer ku kala argti duwanaa doorashada 16-kaan kursi, waxaana qeyb ka ahaayeen caqabadihii dib u dhigay doorashooyinka.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda, Maxamed Xuseen Rooble, ayaa bogaadiyay soona dhaweynayaa go’aankan, isagoo tixgalinaya xaqa matalaadda dadka Gobolka Gedo iyo ahmiyadda dhammaystirka doorashada.
Ra’iisul Wasaaruhu wuxuu Guddiga doorashooyinka Jubaland [SEIT] iyo Dowlad-goboleedka Jubaland ugu baaqay in ay si dhaqso ah u soo dhammaystiraan kuraasta dhiman, si aysan carqalad hor leh u imaan.
Madaxweynaha Jubaland Axmed Madoobe, ayaa dhankiiisa soo dhaweeyay go’aanka Guddiga Doorashooyinka ee lagu dardar galinayo doorashooyinka degaan doorashada labaad ee Dowlad gobolleedka Jubaland.
Tallaabadaan ayaa ka dhigan in Farmaajo ay gacantiisa ka baxeen dhamaan kuraastaas, taasoo ka dhigan in ay hoos u sii dhacday rajadiisa dib u doorashada, oo markii horaba ceel dheer ku jirtay.